Inkqubo yomgangatho-iXiamen Kinghow yeemveliso zangaphandle Co., ltd.
Isidingo sakho soMgangatho
Sikwazi ngokugqibeleleyo ukuphatha naziphi na iimfuno zakho zomgangatho. Besisemarikeni iminyaka ngoku sinenkqubo emiselweyo neyamkelweyo ukanti siqhubeka siphucula imigangatho yethu ukufezekisa ulindelo lwabathengi bethu xa kufikwa kumgangatho wemveliso.
Kungoko ke iingxowa zethu zinokukhuphisana nazo zonke iintlobo zamazwe aphesheya njenge-TOV, CSCV, SGS, TUV kunye ne-ITS njl.
I-OEM iyazibophelela kwiimfuno zabathengi kwaye siqinisekisa umgangatho wemveliso yethu. Ukwaneliseka yinto ephambili kuthi. Ukuba ufumanisa ukuba awonelisekanga sikunika ukubuyiswa kwakhona kwemveliso okanye ukubuyisela imali yakho.
Ukujonga Emva koLawulo oluvela kuMthengisi ukuya kuLayisho
Imiba yeTrust ijongana namava ethu
Kulula ukulalanisa kulawulo lomgangatho eTshayina. Izinto azicacanga apha njengoko iinkampani ezininzi zihlala zinyoba ulawulo lomgangatho weqela lesithathu. Ukuthintela loo nto, siqeshe iqela lethu le-QC kwaye basebenza ngokwabo ngaphandle kongenelelo kumzi-mveliso. U-OEM uqinisekisile ukuba bayayenza imisebenzi yabo ngokunyaniseka ngokulandela imigaqo engqongqo kubo engabavumeliyo ukuba bayinike kwisilingo sokwenza imali eyongezelelweyo.
Ukulawula imveliso evela kubaxhasi ukuya kufakwa
Ngomgangatho asithethi kuphela umgangatho wemveliso, ikwabandakanya nolawulo lokubonelela ngaphambi kokuba siqale imveliso yobunzima. Ngaphandle kwalonto, ikwangumsebenzi wethu ukulayisha ngononophelo iipakeji zokugqibela kwisitya ukuhambisa ngokukhuselekileyo emnyango wakho. Ke ngoko, iingcali zethu ze-QC zigcina iso kuyo yonke inkqubo ukusukela ekuqaleni ukuya kulayisho.
Izigaba ezahlukeneyo zeNkqubo yeQC
Umsebenzi wabo kubandakanya ukuqonda iimfuno zakho kunye nokuhambisa zonke iinkcukacha ngolwimi lwesiTshayina kwigumbi lesampulu. Baye bathathe umdla kwixabiso kunye nenqanaba lomgangatho elilindelweyo ngokucebisa ngophuculo oluncinci kwigumbi lesampulu.
Amagcisa ethu kwigumbi lesampulu achitha ixesha elininzi kwiimfuno zakho kunye nokubalulwa ukuze akunike elona xabiso lifanelekileyo eliza kukunceda ufikelele kwixabiso ojolise kulo. Ngexesha lesampulu, uluhlu lwezimvo zobugcisa lwenziwa kwimveliso yobuninzi.
Le yintlanganiso yemveliso engaphambili ebandakanya bonke oochwephesha, ukuthengisa kunye neQC eziyinxalenye yeprojekthi yakho. Zonke iinkcukacha malunga neprojekthi yakho ziyaxoxwa okt inkqubo yemveliso entsonkothileyo, amanqaku asemgangathweni kunye neenkcukacha zokupakisha.